Somaliland.Org » Kulmiye: Gunaanadkii Shirweynaha, Kelmadihii Hogaanka Cusub Iyo Qaarkamida Ergada Culus
March 31st, 2008 Comments Off Hargeysa (Somaliland.Org)- Gego-gabadii Shirweynaha Xisbiga Kulmiye oo lagu soo xidhay Hoteel Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa waxa khubada ka jeediyay Hogaanka cusub ee Xisbiga loo doortay inay caynaanka u hayaan Shanta Sano ee soo Socota.Waxaan mahad idinka mahadcelinayaa sida qiimaha leh ee aad ii sharafteen, Gudoomiyahana iiga dhigteen Afar sano oo dambe. Wax Alla waxaan hagraynaa ma jirto aniga iyo saaxiibadayna waxaan idinka balan-qaadaynaa inaanu si hagar la’, cadalada, sinaana, daacada idiinku shaqaynaynaa. Inaanu noqono xubnahayagani dad isku duuban oo wada shaqeeya oo wada tashada.in Ilaahay naga yeelo”
“Ciyaalnimadii waxa la odhan jiray Ka naxoow nafta waa. Markaa anigu odhan maayoo waxa ku jira UDUB ilmaadeeraday. Ee waxaan leeyahay sidaa idin odhan maynee waxaan leeyahay bal idinkana waan idin sugaynaa ee bal nagu soo casuuma shirkiina.” Ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdiqaadir.”Haddii la yidhaahdo Madaxweynaa iyo dawladiisu dooni mooyaan ictiraafka, waxaan leeyahay way doonayaan laakiin waxaanay garanayn habkii loo marayay. Adduunka maanta xasuuq iyo waxaas cidi innagu eegi mayso oo kun xasuuq oo keenii ka daran ayaa dhacay, ee waxa laynoogu soo istaagayaa waa dimuqraadiyada. Dimuqraadiyadu maaha Madaxweyne loo kordhiyo ee maaha in la cakariyo. Doorashada dib looma dhigo waan ognahay inaad xukunka jeceshihiin oo idinku necbaysan mayno. Waxaanse waydiiyey miyaad quusateen, oo in aanu idinka helo ayaad ku quusateen oo bilaad naga heshaan ilaahay kama dhigee. Ha quusanina ee nala tartama ayaan leeyahay UDUB. Waxaan leeyahay Shacbiga bal annaga ha noo daynina ee bal idinka danihiina eegta, oo ku xisaabtama annagu wax baanu idiin qabanaynaa. Biriijkaa Afarta sano la dhisi kari laayahay ee Hargeysa Afar bilood baan ku dhisanayn. Waar annagu haddii ay gabadhu kaa xanuunsato waxay yidhaahdaa markay na shaxaadayaan gabadhii buktee, waar annagu gabadha dhakhtar baan u samaynaynaa.inkasta oo